Mampiahiahy: voafehy tato anatin’ny telo volana ny vidin-tsolika | NewsMada
Mampiahiahy: voafehy tato anatin’ny telo volana ny vidin-tsolika
Toy ny isam-bolana, mitaintaina hatrany ny mpanjifa amin’ny mety ho fiakaran’ny vidin-tsolika. Tsiahivina fa tsy nihetsika ny vidiny nandritra ny telo volana, fa tamin’ny desambra 2018 indray vao nisondrotra.
Tsy marin-toerana! Manaraka ny fiovaovan’ny vidin-tsolika eo amin’ny tsena iraisam- pirenena ny eto Madagasikara. Na izany aza, maro ny singa jeren’ny fanjakana, fa tsy ampiharina ara-bakiteny, toy ny fiovaovan’ny sandam-bola Ariary mitaha amin’ny dolara , (vola vahiny ividianana azy any ivelany), ny saram-pitaterana an-dranomasina, ny masonkarena madinika samihafa, mandra-pahatonga azy eny amin’ny mpanjifa. Nanamarika koa ny minisitry ny Angovo sy ny akoranafo (MEH), Rasoloelison Lantoniaina, fa telo volana farafahakeliny ny fotoana hamandrihana hividianana azy any amin’ny mpamatsy solika any ivelany, ary ampiharina aty an-toerana. Misy àry vidiana enim-bolana na herintaona mialoha, ho an’ireo firenena manambola, ka azo fehezina kokoa ny fiovaovany tsy hiantraika any amin’ny vidim-piainana ao amin’izy ireo.
Tsy tena ny vidiny iraisam-pirenena
Raha ny eto Madagasikara, nilaza ny minisitra Rasoloelison Lantoniaina, fa “maro ny ezaka nataon’ny fanjakana, nahafahana tsy nampihetsika ny vidin-tsolika nanomboka ny tapaky ny septambra, oktobra ary novambra 2018”. Nisondrotra indray anefa ny desambra ary tsy niova ny janoary 2019. Manodidina ny 50 Ar/l eo foana ny fisondrotana ataon’ny fanjakana. Ankehitriny, amidy 4.200 Ar ny litatry ny lasantsy, 4.350 Ar ny gazoala, 2.630 Ar ny solika fandrehitra.
Nambaran’ny minisitra fa tsy tena ny vidiny eo amin’ny tsena iraisam- pirenena ny ampiharina amin’ny mpanjifa. Manodidina ny 600 Ar hatramin’ny 700 Ar isaky ny litatra ny elanelan’ny vidiny ampiharina eto Madagasikara miohatra amin’ny tena vidiny eo amin’ny tsena iraisam-pirenena. Hiova ny mpikambana ao anatin’ny governemanta, manatanteraka ny drafi- panjakana volavolain’ny filoham-pirenena.